Aluminium Window, Aluminium Door, aluminium ingxubevange Window, aluminium ingxubevange Door - Renshi
Shanghai Renshi Doors & Windows Co., Ltd mveliso ngobuchule nelithumela iifestile neengcango ngubani sele uphando kulo mhlaba iminyaka engaphezu kwe-15. imigca yethu imveliso ezisasazwa kwi window aluminiyam kwaye ucango, aluminiyam louver, ucingo iglasi ibalustrade kunye ichibi, njl iimarike zethu eziphambili zezi Australia, New Zealand, iMelika kunye amazwe aseYurophu.
Ngamava esisityebi ukwenziwa kunye amazwe, singakwazi ukubonelela izicwangciso uyilo kunokwenzeka ukuba zonke izindlu zokuhlala kunye nezakhiwo zorhwebo. Ngapha koko, phantsi imigangatho engqongqo, umgangatho kunye nenkonzo yethu aqinisekisiwe. Yiyo loo nto ke uzuze negama elilungileyo kunye nabathengi jikelele.
Sicela ukwamkela basenokuba ngabaxhamli kwaye ngoku ukuba uqhagamshelane nathi ngoshishino elizayo ngokusekelwe iinzuzo macala!
Cela ikowuti online
Khetha uhlobo ilungele nohombisoa kakuhle endlwini yakho.